श्रीमतीले छोडेर गाइन, श्रीमानले श्रीमतीसंगको यौ’नको कुरा गर्दै लेखे यस्तो प्रत्र ! – ताजा समाचार
श्रीमतीले छोडेर गाइन, श्रीमानले श्रीमतीसंगको यौ’नको कुरा गर्दै लेखे यस्तो प्रत्र !
पूर्वपत्नीजस्तो से क्स डलको चाहना- सम्बन्ध विच्छेदपछि एक जना ब्रिटिस नागरिकले पूर्वपत्नीलाई भुल्न सकेनन्। ती व्यक्तिले अनलाइन बजार ‘हस–हस’मा एउटा पत्र लेखे। उनको अनुरोध थियो– सेक्स डल उत्पादन गर्ने कम्पनीले उनको पूर्वपत्नीजस्तै देखिने यौ न खेलौना बनाइदेओस्। नाम नखुलाइएका ती व्यक्तिको सन् २०१७ मा पत्नीसँग सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो। ब्रिटिस अनलाइन पत्रिका ‘मिरर’ का अनुसार ३५ वर्ष लामो वैवाहिक सम्बन्ध एकाएक टुटेपछि उनी आहत भएका थिए। उनले ‘हस–हस’ मा लेखेको पत्रमा आफूले पूर्वपत्नीलाई भुल्न नसकेको बताएका छन्। ‘म हर घडी उनको यादमा तड्पिरहेको छु,’ उनले पत्रमा लेखेका छन्, ‘म अरू कसैसँग सम्बन्ध बनाउनेबारे सोच्न पनि सक्दिनँ। त्यसैले एउटा से क्स डल चाहन्छु, जो मेरी पूर्वपत्नीजस्तै देखियोस्। मेरो यो चाहना तपाईंहरूलाई अनौठो लाग्न सक्छ। तर, म पूर्वपत्नीको स्थान से क्स डलले लेओस् भन्ने चाहन्छु।’
उनले केही से क्स डल उत्पादक कम्पनीसँग कुरा गरेको तर उनीहरूले आफूले भनेबमोजिमको यौ न खेलौना उपलब्ध गराउन नसकेको बताए। ‘हस–हस’लाई पठाएको इमेलमा उनले लेखेका छन्, ‘मैले चाहेको से क्स डलको कपाल मेरी पूर्वपत्नीको जस्तै सुन्दर र सुनौलो हुनुपर्छ। यो मेरो पहिलो शर्त हो।’ आफूले खोजे र चाहेजस्तो से क्स डल उपलब्ध गराउन कम्पनीले प्रयास गरिदिन उनले अनुरोध गरेका छन्।